Faahfaahintaas yar ee kaa qaadaya nolol caafimaad leh | Bezzia
Susana Garcia | 04/05/2021 20:00 | Daryeel caafimaad, Caafimaadka
Mararka qaar waxyaabo yaryar ayaa leh cawaaqib xumo waxaana cadeyn taas u ah isku darka tilmaamaha yar yar ee maalinlaha ah waxay u horseedi kartaa nolol aan aheyn nooca nolosha ee aan dooneyno inaan hogaamino Faahfaahinta yar ee nolol maalmeedka ayaa naga baxsan laakiin waxay noqon kartaa mid go'aan leh marka ay timaado hogaaminta qaab nololeedka go'aansaday ama in gebi ahaanba la beddelo. Waa muhiim in la xoojiyo oo keliya tilmaamaha waaweyn laakiin sidoo kale kuwa ugu yar.
Un faahfaahin yar oo soo noqnoqota maalin kasta waxay noqoneysaa wax na saameynaya badan oo. Tani waxay u socotaa wax walba waxayna sidoo kale noqon kartaa wax fiican maxaa yeelay isbeddelada yar yar waxaan ku gaari karnaa yoolal waaweyn. Marka bal aan ogaanno waxa ay yihiin faahfaahintaas yar ee aan maanta kuu oggolaanayn inaad ku noolaato nolol caafimaad leh.
1 Adigu qorsheyn meysid cuntadaada
2 Waxaad naftaada u ogolaataa waxyaabo badan
3 Waxaad kaliya diirada saareysaa miisaan luminta
4 Waxaad sameysaa isboorti aadan jeclayn
5 U oggolow naftaada inaad dareento isbeddelka
Adigu qorsheyn meysid cuntadaada
Tani waxay u muuqan kartaa wax lala yaabo laakiin haddii aynaan qorsheyneynin cuntadeena waxaa aad nooga fudud inaan ku dhicinno jiritaanka cunista wax aan caafimaad qabin oo si heer sare ah loo shaqeynayo ama leh dufan iyo sonkor. Taasi waa sababta qorshaynta wanaagsan ay wax badan kaaga caawin karto markay tahay bilaabida nolol caafimaad leh. Waan isku kalsoonaan karnaa laakiin waa inay noqdaan kuwo waqtiga ilaaliya, kaliya maalmaha gaarka ah. Waqtiga intiisa kale waa inaan ku ekaano mid cunto isku dheelitiran oo caafimaad leh ka fogaanshaha in lagu daro cunto fudud ama waxyaabo ka dhigi kara cunnadeennu inay joojiso caafimaadka.
Waxaad naftaada u ogolaataa waxyaabo badan
Waa run in marwalba aan leenahay maalmo cayiman markaan damacno wax macaan ama ay adagtahay in aan cunno ama cabin aalkolo inta xaflad socoto. Laakiin waxyaalahan noocan ahi waa waxa inaga dhigaya ugu dambayntii inaynaan u hoggaamin karin qaab nololeed sida ugu wanaagsan ee aynu doonayno ugu dhawaan innaga oo aan dareensiin, maxaa yeelay waxaa nalagu qaadayaa tanaasulaadyadan yaryar. Marka waa muhiim in markasta laga feejignaado maalmaha aan wax awoodi karno, iyada oo aan laga badin. Kaliya maahan caafimaadkeena iyo khadkeena ayaa noo mahadcelin doona, laakiin sidoo kale fiicnaanta caloosha. Waxaad ogaan doontaa sida dheef-shiid kiimikaadku u culus yahiin iyo sida aad u dareento fiicnaan iyo fiicnaan.
Waxaad kaliya diirada saareysaa miisaan luminta
Tani maahan wax lagu daaweyn karo nolosha caafimaadka leh, maadaama ay jiraan dad laga yaabo inay xoogaa miisaanka sareeyaan haddana caafimaad qabaan iyo kuwo kale oo khafiif ah. Markaa ka fikir inayna ahayn dhimista miisaanka inaad u ekaato si ka wanaagsan, waxay ku saabsan tahay daryeelka jirkaaga inaad dareento fiicnaan. Markaan is daryeelno waxaan hagaajineynaa isku kalsoonaantayada laakiin sidoo kale caafimaadkeena, habka difaaca jirka sidaa darteed waxaan horumarinaa jirkeena oo dhan muddada dhow iyo tan fog. Waa aragti caalami ah oo caafimaad oo ka fog fikraddaas moodada ah oo diiradda saareysa oo keliya miisaanka.
Waxaad sameysaa isboorti aadan jeclayn
Tani waa qalad, maxaa yeelay mustaqbalka fog waxaad ku dambeyn doontaa inaadan ciyaarin isboorti. Qof kastaa wuu heli karaa nashaad ku habboon midkooda habka nolosha iyo dhadhankaaga. Tani waa mid muhiim u ah inay sii socoto waqti ka dib. Taasi waa sababta ay tahay inaadan kaliya kala duwanaanin waxqabadkaaga oo aad isku daydo inta soo jiidata dareenkaaga, laakiin waa inaad raadisaa kuwa aad jeceshahay si ay qayb uga noqdaan noloshaada.
U oggolow naftaada inaad dareento isbeddelka
Isbedelada ma dhacaan habeen kaliya waana taas sababta mararka qaar aan ugu dhib badnaano fulintooda. Waa muhiim dhagayso jirkeena markaan isbedel sameyno qaab nololeedkeena, maxaa yeelay wuxuu noo sheegi doonaa inaan si fiican u shaqeyneyno. Tani ma dhacdo habeen keliya, laakiin fayoobaanta jireed iyo maskaxeed waxay la timaadaa nolol caafimaad leh waana taas sababta aan u ogaan doonno markaan dareemno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Faahfaahinta yar ee kaa hortaagan inaad hesho nolol caafimaad leh